कस्ताे छ २०७५ सालमा तपार्इँकाे ग्रहदशा ? वार्षिक राशिफल « Janata Samachar
कस्ताे छ २०७५ सालमा तपार्इँकाे ग्रहदशा ? वार्षिक राशिफल
प्रकाशित मिति : 14 April, 2018 7:01 am
युवा ज्याेतिष महेन्द्र भण्डारी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसनलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन जारी भएको यसअघिको
काठमाडौं । इलाममा २५ पुसदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेपछि काठमाडौं ल्याइएको
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि फाराम भर्न दिएको समयसीमा सकिँदा करिब १० हजार कर्मचारीले